Vaimbi vanogashira 71% iyo inounganidzwa Apple Music | Ndinobva mac
Vaimbi vanogashira 71,5% kubva kuApple Music
Nhau dzakanaka dzevanyori, avo vanoona muhoro wavo wakadzikira mune ino mimhanzi nyika. Mutevedzeri weMutungamiriri weTunes Robert Kondrk akatsigira izvozvo Apple ichagovera 71,5% yemari inowanikwa neApple Music, pamwe nevaridzi vemimhanzi.
Isu tinofanirwa kufunga nezve zvakawanda zvinhu zveizvi, nekuti mwedzi yekutanga iyo mushandisi mushandisi wemahara kuti akwanise kuteerera mimhanzi, hazvizounze mabhenefiti mukati Apple Music, saka muimbi, hapana purofiti.
Apple haizobhadhara chinhu kune varidzi vemimhanzi yenziyo dzinoridzwa panguva yeApple Music yekuyedza nguva. Kubhadharwa kweApple mumashure kuchave mashoma muzana akakwirisa kupfuura aya anopiwa nemamwe masisitimu muindasitiri semubairo wenguva yakareba yekuyedza yatinopa, uye ndezvekuti mamwe masevhisi emimhanzi anotenderera anongopa mwedzi mumwe chete mahara - Robert Kondrk .
Sezvo isu tichinyatso kuziva, kana zvasvika pakugovera mabhenefiti, makambani ekurekodha, ndidzo dzakakura vanobatsirwa, asi iyo muzana inopa Apple MusicIyo yakakura kwazvo, izvo zvichabatsira zvikuru muenzi. Uye mune dzimwe nguva, zvinoenderana nechibvumirano, mabhenefiti auchazowana acho akura zvakanyanya Kumutungamiriri wokuimba.
Uye zvakare, kubva pamusoro, mabhenefiti kunze kweUS akakwirira, ivo vanokwira kusvika 73%, nekuti zvinoenderana ne mitero yenharaunda yega yega. Izvi zvinoitikawo neApple Music, seyatinoshanda naJordi akatinyorera mune ino chinyorwa (Apple Music ichave yakachipa mune dzimwe nyika). Zvakanaka, muUnited States, Spain uye nyika zhinji iyo mutengo wakaziviswa neApple ndeye 9,99 uye 14,99 madhora / maEuro pamwedzi zvichiteerana, muIndia neRussia mutengo uyu unogona kudzikiswa kana shanduko 1 kusvika 1 yaiswa mumari dzenyika. Apple Music inotarisirwa kuve yakaburitswa muna Chikumi 30.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Vaimbi vanogashira 71,5% kubva kuApple Music
Ungatenge sei iyo Apple Watch kuSpain nedzimwe nyika dzenyika yechipiri batch yekutangisa?